Servicebroschyr nepaliska - Rikosuhripäivystys
पीडि त सहायता फि नल्या ण्ड (RIKU) – Servicebroschyr nepaliska
Servicebroschyr, nepaliska (pdf)
पीडि त सहायता फि नल्या ण्ड (RIKU) ले अपराधक ा पीडि त, ति नका नजिकक ा नातेदार र साक्षीलाई परामर्श दिन्छ र सहयोग गर्छ ।
नि म्न अवस्था मा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होस्:
तपाईं अपराध पीडि त हुनुहुन्छ भने
तपाईं अपराधक ो साक्षी हुनुहुन्छ भने
तपाईंको नजिकक ो नातेदार अपराधक ो शिक ार हुनुभएको छ भने
तपाईंलाई आफू अपराध पीडि त भएको छु जस्तो लाग्छ र तपाईं आफ्नो अनुभाव आदान प्रदान गर्न तथा व्यवहारिक परामर्श लि न चाहनुहुन्छ भने हामीले दिने
हामीले दिने सेवा पूर्ण तया गोपनीय हुन्छ । तपाईं हामीलाई आफ्नो परिचय नखुलाइकन फोनबाट वा अनलाइन माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईं हाम्रो कुनै शाखामा गएर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना अनुभव आदान प्रदान गर्ने अवसर प्रदान गरिदिने अनुरोध पनि गर्न सक्नु हुन्छ । हामी तपाईंको सहमति बि ना कसैलाई तपाईंको मुद्दाको बारेमा जानकारी दिने छैनौं ।
Riku.fi वेबसाइटमा विभिन्न भाषामा RIKU तथा फौजदारी मुद्दा प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिइएको हुन्छ ।
तपाईंलाई कतै मानव तस्करी वा श्रम शोषण भएको छ जस्तो लाग्छ भने help@riku.fi मा इमेल पठाउनुहोस् । तपाईं आफ्नै भाषामा इमेल लेख्न पाउनुहुन्छ ।
RIKUchat फिनि स भाषामा उपलब्ध च्या ट सेवा हो । riku.fi
राष्ट्रिय हले ्प लाइन 116 006
सोमवार–शुक्रबार बि हान9देखि साँझ 8 सम्म (प्रायजसो फिनि स भाषामा उपलब्ध)
कानुनी परामर्श हेल्प लाइन 0800 161 177
सोमवार–बि हीवार साँझ5बजेदेखि साँझ7बजेसम्म (फिनि स भाषामा)
फि नल्या ण्डमा रहेका RIKU का शाखा कार्या लयले नि ःशुल्क सहायता प्रदान गर्छन् । हामी गोपनीयता कायम गर्ने शपथ लि एका दोभाषे प्रयोग गरेर तपाईंसँग कुरा गर्न सक्छ ौं । riku.fi मा सम्पर्क वि वरण दिइएको छ ।
तपाईं एक सहयोगी व्यक्ति उपलब्ध गराइदिन पनि अनुरोध गर्न सक्नु हुने छ । ती व्यक्तिले तपाईंलाई भेटेर तपाईंसँग छलफल गर्न तथा व्यवहारिक सुझाव प्रदान गर्न सक्ने छन् । ती व्यक्ति तपाईंसँगै प्रहरी कार्या लय वा अदालत जान पनि सक्ने छन् ।
RIKU एक गैर राजनैतिक , गैर धार्मिक गैर राष्ट्रिय हले ्प लाइन 116 006 सरकारी संस्था (NGO) हो ।
RIKU ले मानव तस्करी तथा श्रम शोषणका शिक ार भएका सबै जनालाई सहायता प्रदान गर्छ ।
तपाईं वा तपाईंको नजिक ेका कुनै व्यक्तिले तलकामध्ये कुनै अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
कसैले तपाईंलाई कुनै गैर कानुनी वा तपाईंले गर्न नचाहेको कुरा गर्न दबाब दिइरहेको छ ?
कसैले (श्रीमान वा श्रीमती, नातेदार, रोजगारदाता) तपाईंको गतिविध ि वा तपाईंले अरूसँग गर्ने सञ्चारको निय न्त्रण गरिरहेका छन् ?
तपाईंलाई कसैले फि नल्या ण्ड ल्या एकोमा पैसा मागि रहेको छ वा तपाईंले पहि ले नै यस्तो पैसा ति रिसक्नु भएको छ ?
तपाईंले भनेको नमानेमा तपाईंलाई स्वदशे फिर्ता पठाइने छ वा तपाईंको आवास अनुमति रद्द गरिने छ भनेर कसैले तपाईंलाई धम्क्या एको छ ?
कसैले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी खुलासा गरिदिने धम्की दिइरहेको छ ?
तपाईंलाई आफूले आफ्ना रोजगारदाता वा श्रीमान् वा श्रीमतीसँग वि मति राखेमा वा काम छोडेमा वा सम्बन्ध अन्त ्य गरेमा तपाईं वा तपाईंका प्रियजनलाई क्षति पुर् य ाइने छ भन्ने कुरालाई लि एर डर लाग्छ ?
तपाईंलाई झुक्याएर हालको परिस्थिति मा हालको काम गर्न लगाइएको छ ?
तपाईंलाई तपाईंले हाल प्राप्त गरिरहके ो तलवभन्दा बढी तलव दिने प्रति ज्ञा गरिएको थिय ो ?
तपाईं अति रिक्त तलव प्राप्त नगरिक न हप्ताको पाँच दिन र दिनको 8 घण्टा भन्दा बढी काम गरिरहनुभएको छ ?
कसैले तपाईंको नाममा ऋण लि एको छ र तपाईंलाई आफूले नबुझ्ने कागजातमा हस्ता क्षर गर्न लगाएको छ ?
कसैले तपाईंको बैंक खाता प्रयोग गरिरहके ो छ वा तपाईंको कमाइ चलाइरहेको छ ?
तपाईंईंले माथिकथिक ा कुनै प्रप्रश्नश्नमा सकारात्मक्मक जबाफ (हो) दिनुभएको छ भने, कृ पया जुन सुकै भाषामा help@riku.fi मा इमेल गर्नु होस् वा riku.fi/trafficking मा उल्लिखि त कुनै नम्बरमा टेलि फोन गर्नु होस् ।